Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Dib U Soo Celinta iyo Dib U Soo Celinta Suuqa! | Martech Zone
Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Dib U Soo Celinta iyo Dib U Soo Celinta Suuqa!
Sabtida, Diisambar 14, 2019 Sabtida, Diisambar 14, 2019 Douglas Karr
Ma ogtahay taasi kaliya 2% dadka soo booqda ayaa wax iibsada markay booqdaan dukaan internetka markii ugu horeysay? Dhab ahaan, 92% macaamiisha xitaa ha qorsheynin inaad wax iibsato markaad booqanayso dukaanka internetka markii ugu horeysay. Iyo saddex meelood meel macaamiisha kuwaas oo doonaya inay iibsadaan, ka tagaan gaadhiga wax iibsanayaa.
Dib u jaleec habdhaqankaaga wax iibsashada ee khadka tooska ah waxaadna inta badan ogaan doontaa inaad daalacato oo aad wax ka eegto wax soo saarka internetka, laakiin markaa u daa inaad eegto tartamayaasha, sugto maalinta mushaharka, ama aad uun maskaxdaada beddesho. Taasi waxay tiri, shirkad walba danteedu waxay ku jirtaa inay ku daba gasho markii aad booqato degel maxaa yeelay waxaad soo bandhigtay dabeecad tilmaamaysa inaad xiisaynayso wax soo saarkooda ama adeeggooda. Raadintaas waxaa loo yaqaan dib-u-qorsheyn… ama mararka qaarkood dib-u-eegis.
Nidaamyada xayeysiinta sida Facebook iyo Google Adwords waxay ku siinayaan qoraal aad ku dhejiso boggaaga. Markuu booqde booqdo bartaada, qoraalka ayaa ku soo dejinaya cookie aaladda biraawsarkooda iyo pixel ayaa la buuxiyaa oo xogta dib ugu celiya barta xayeysiiska. Hadda, meel kasta oo qofkaasi galo shabakadda isla nidaamka xayeysiinta la geeyo, xayeysiis ayaa la soo bandhigi karaa si loo isku dayo in la xusuusiyo badeecada ama goobta ay eegeen.
Waxay u badan tahay inaad dareentay tan markaad wax ka iibsaneysid khadka tooska ah. Waxaad fiirineysaa labo kabood oo wanaagsan oo goobta yaal ka dibna waad iska tagaysaa. Laakiin markii aad baxdo, waxaad ku arkeysaa xayeysiisyada kabaha ee Facebook, Instagram, iyo daabacadaha kale ee internetka. Taas macnaheedu waa goobta e-commerce waxay gaysay ololeyaal dib-u-habeyn ah. Dib-u-habeynta booqdaha jira waxay leedahay dib-u-celin aad u sareysa oo ku saabsan maal-gashiga marka loo eego isku dayga ah in la helo soo-booqde cusub, sidaa darteed magacyadu waxay adeegsadaan farsamada markasta. Dhab ahaan, xayeysiisyada dib loo qorsheeyey waxay u badan tahay in 76% ay qasabno inay ku dhacaan on Facebook ka badan ololayaasha xayeysiiska caadiga ah.
Mana aha oo kaliya bogagga elektaroonigga elektaroonigga ah ee geyn kara ololeyaasha dib-u-habeynta. Xitaa B2B iyo shirkadaha adeegga badanaa waxay galiyaan dib-u-habeyn marka martidu soo degaan bogga ololaha. Mar labaad, waxay muujiyeen inay daneynayaan badeecada ama adeegga… markaa waxtar ayey leedahay in la eryado.
Dib-u-habeynta iyo dib-u-ololeynta ololeyaashu waxay noqon karaan kuwo ballaaran ama gaar u ah howlaha qaarkood.
Soo-booqdayaasha yimid degel ama bog dib ayaa loo dayactiri karaa. Kani waa dib-u-dejinta pixel-based oo waxay si fudud u soo bandhigaan xayeysiis markay daalacanayaan shabakadda.
Soo-booqdayaasha bilaabay hawsha beddelka iyagoo diiwaangelinaya ama ka tagaya gaadhigii wax iibsanayay. Kani waa dib-u-dejinta liiska ku saleysan oo aad codsan kartaa xayeysiisyada la soo bandhigay ee shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale fariimaha moobiilka iyo emaylka maxaa yeelay waxaad dhab ahaan leedahay aqoonsiga rajada
Dib-u-habeynta iyo Dib-u-iibinta
In kasta oo ereyada inta badan loo isweydaarsado, dib-u-celinta waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu sharaxo xayeysiinta ku saleysan pixel iyo dib u soo kabashada waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu sharaxo dadaallada ku saleysan liistada si dib loogu hawlgeliyo macaamiisha iyo ganacsiyada. Ololeyaasha gawaarida wax iibsiga ee laga tagay ayaa inta badan keena sicirka ugu sarreeya ee soo noqoshada waxayna ku noqdaan maalgashiga suuq geynta
Waa maxay Dib-u-habaynta Habdhaqanka?
Dib-u-habeynta dib-u-habeynta ayaa si fudud ugu riixeysa xayeysiinta qof kasta oo booqday bogga gaarka ah ee bogga, ama ka tagay nidaamka lacag-bixinta ee bartaada. Si kastaba ha noqotee, nidaamyada casriga ahi waxay dhab ahaan ilaalin karaan dabeecadaha shaqsiyaadka markay booqdaan shabakadda. Dadkooda, juqraafi ahaan, iyo akhlaaqdooda akhbaarta waxay meeleyn karaan xayeysiisyada shaqsi ahaaneed iyo kuwa waqtiga ku habboon si loo kordhiyo fursadaha beddelaadda loona yareeyo kharashka guud ee xayeysiinta.
Iva Krasteva oo ka tirsan Shaqooyinka Suuq-geynta Dijital ah, oo ah degel UK ah oo laga helo shaqooyinka suuq-geynta dijitaalka ah, ayaa faahfaahin ka bixineysa noocyada xeeladaha dib-u-habeynta maqaalkeedii ugu dambeeyay, Dib-u-habeynta tirakoobka 99 si loo muujiyo ahmiyada ay u leedahay suuqleyda!
Noocaan waxaa la qaatay 26.1% waqtiga.
Tani waxay ku shaqeysaa iyada oo la abuurayo olole emayl oo qofkasta oo ku riixaya emaylkaaga uu hadda bilaabi doono inuu arko xayeysiiskaaga. Waad liis garayn kartaa emayl gaar ah si aad u bartilmaameedsato dhagaystayaasha gaarka ah oo aad ugu hagto waxa ugu xiisaha badan iyaga degelkooda.
Tan waxaa lagu sameeyaa dib-u-habeynta koodhka HTML ama saxiixa emaylkaaga.
Goob iyo Dib-u-habeyn firfircoon
Noocaan waxaa lagu qaataa inta badan waqtiga 87.9%.
Tani waa halka uu macaamilku dhab ahaantii ku soo degay bartaada oo aad la socoto raadinta kuwan soo socda ee raadinaya raadinta si ay u beertaan xayeysiisyo shakhsi ahaaneed oo wakhti ku habboon si ay dib ugu soo jiitaan macaamilka.
Tan waxaa lagu sameeyaa isticmaalka cookies. Markay macaamiishu ku raacsan yihiin cookies waxay ogolaadeen inay u oggolaadaan daalacashadooda inay marin u leeyihiin. Ma jiro macluumaad shaqsiyeed oo la heli karo in kastoo. Si fudud cinwaanka IP-ga iyo halka uu cinwaanka IP-ga ka baaraya ayaa awood u leh in la isticmaalo.
Raadi - Liisaska dib-u-iibinta ee xayeysiinta raadinta (RLSA)
Noocaan waxaa la qaatay 64.9% waqtiga.
Tani waxay u shaqeysaa suuqleyda tooska ah, ee mashiinka raadinta ee lacag bixinta, oo ku hagaya macaamiisha bogga saxda ah raad raaca xayeysiiska ku saleysan raadintooda.
Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la daawanayo cidda riixday xayeysiisyada horay loo bixiyay waxayna kuxirantahay raadinta waxaad dib ugu habeyn kartaa macaamiisha xayeysiis dheeri ah si aad ugu hogaamiso jihada aad ugu baahan tahay inay ku socdaan.
Xayeysiinta fiidiyowga ayaa sii kordheysa 40% sanadkiiba iyadoo in ka badan 80% ka mid ah taraafikada internetka loo jiheeyo fiidiyowga.
Tani waxay shaqeysaa marka macaamilku booqdo bartaada. Markaa waxaad dabagal ku sameysaa dhaqankooda heer kasta oo aad wax ka iibsaneyso. Markay markaa ka baxaan goobtaada oo ay bilaabaan daalacashada waxaad dhigi kartaa xayeysiisyo fiidiyoo istiraatiiji ah. Kuwani waxay noqon karaan kuwo shakhsi ahaaneed si loo bartilmaameedsado danaha macaamiisha si ay ugu soo celiyaan bartaada.
Faahfaahintani waxay faahfaahinaysaa tirakoob kasta oo aad waligaa rabto inaad ka ogaato dib-u-dejinta, oo ay ku jiraan aasaasiga, sida suuqleydu u arkaan istiraatiijiyadda, waxa macaamiisha ka fikiraan, dib-u-dejinta iyo dib-u-soo-celinta, sida ay ugu shaqeyso daalacashada, sida ay ula shaqeyso barnaamijyada moobiilka, noocyada dib-u-dejinta, dib-u-dejinta baraha bulshada, dib-u-habeynta waxtarka, sida loo dejiyo dib-u-dejinta, yoolalka dib-u-habeynta, iyo kiisaska isticmaalka dib u habeynta.
Hubso inaad booqato Shaqooyinka Suuqgeynta Dijital ah si aad u aqriso maqaalka oo dhan, Dib-u-habeynta tirakoobka 99 si loo muujiyo ahmiyada ay u leedahay suuqleyda! - waxay haysaa macluumaad tan ah!
Tags: Gawaarida dukaanka laga tagayshaqooyinka suuq-geynta dijitaalka ahshaqooyinka suuq geynta dijitaalka ah ukpixel facebooksida dib-u-eegistu u shaqeysosida dib-u-dejintu u shaqeysoIva Krastevadib u eegista barnaamijka mobiladaxayaysiis ku saleysan pixeldib u soo kabashadadib-u-qiimeyn infographic ahdib u habeyn video
Foomamka Nadiifinta Xogta ee Guud ee Excel
Tilmaamaha Muuqaalka Muuqaalka Warbaahinta Bulshada ee 2020